Ukuphucula njani ukunyaniseka kwabaThengi ngeNtengiso yeDijithali | Martech Zone
Awungekhe uyigcine into ongayiqondiyo. Xa kugxilwe ekufumanekeni kwabathengi rhoqo, kulula ukuba ihanjiswe. Kulungile, ke uqikelele isicwangciso sokufumana, uyenzile imveliso / inkonzo yakho ukuba ilingane kubomi babathengi. Isindululo sexabiso sakho esisodwa (UVP) siyasebenza -Iyala ukuguqula kunye nezikhokelo zokuthenga izigqibo. Uyazi ukuba kwenzeka ntoni emva koko? Ungena phi umsebenzisi emva kokugqitywa komjikelo wentengiso?
Qala ngokuqonda abaphulaphuli bakho
Nangona kumnandi ukuqhubeka nokufumana amajelo amatsha kunye nabaphulaphuli oza kubathengisela, kubiza kakhulu ukugcina enye. Nangona kunjalo, ukugcinwa akuxhomekekanga kubaqhubi abafanayo njengokufumana-iinjongo ezisemva kwazo zahlukile, kwaye nangona indlela yokuziphatha komntu kunye neemvakalelo ezivela kwaba babini ziyancedisana kufuneka kujongwane nazo ngokwahlukeneyo. Ukunyaniseka kwabathengi kwakha kugcino. Ukufunyanwa kwabathengi kungumnyango nje kuyo.
Eyona nto iphambili uyithathileyo apha kukuqonda ukuba abathengi bakho abanyamalali emva komjikelo wentengiso kodwa qhubeka nokuzibandakanya nemveliso / inkonzo kunye nokubopha amava abo kunye nophawu lwakho.
Ke uyazi ntoni ngabathengi bakho ngokuchanekileyo?
Ukugcwalisa umfanekiso wokuziphatha kwabaphulaphuli bakho ngaphambi nangexesha lomjikelo wentengiso kunye nokudibanisa iziphumo kwisicwangciso sakho sokugcina, kuyakufuneka ubeke uluhlu lweedatha ezininzi. Zintoni ezi Iimpawu zeDatha eziPhambili ukuthathela ingqalelo? Ungaqala ngokuvavanya eyakho:
Khangela iiMetriki zokuThengisa
Bakufumana njani abasebenzisi? Yeyiphi imibuzo enophawu / engenophawu yokukhangela ekugqibeleni ekhokelela kuguquko okanye kwindawo yokuthenga? Ngawaphi awona maphepha aphezulu okufika kwaye yayiphi ifanele evuzayo? Ngaba ungabopha iqhekeza elithile lomxholo kwidemografi yomsebenzisi othile ekulethele owona mthamo mkhulu wokuthengisa?
Ukuba uneGoogle Analytics yokulandelela yenziwe yadityaniswa neGoogle Search Console, Uya kuba nakho ukulandelela le mibuzo ukuya kuthi ga kwiinyanga ezili-16 ezidlulileyo kwaye uchonge ezona ziqhuba kakuhle. Ungalwandisa nzulu uhlalutyo ngokubopha la magama aphambili kumaphepha athile okufika kwaye ubachonge njengeendawo zokuqala zohambo lomsebenzisi lokufumana. Oku kungaphulwa nangaphezulu ngokudibanisa le datha kubume bomsebenzisi, uhlobo lwesixhobo, indlela yokuziphatha, kunye nomdla wokuchonga iintlobo zabaphulaphuli ezinokuthi ziguqulwe.
Ziqhuba njani iintengiso zakho? Lithini ixabiso lomndilili eliqwalaselwayo? Lithini ixabiso eliphakathi lokuthenga kwakho? Zithini iimveliso / iinkonzo zakho eziqhuba kakuhle kwaye ngaba kukho unxibelelwano kwidemografi yomsebenzisi kunye neendlela zonyaka?
Ukuba uphucule ukuseta umkhondo we-E-commerce ngeGoogle Analytics okanye enye ideshibhodi yesoftware yomntu wesithathu kuyo, uya kuba nakho ukuzilanda zonke ezi zinto kwaye uqokelele ukuqonda okuxabisekileyo. Eyona nto ibalulekileyo ekufuneka uyigcinile engqondweni kukuba ukuthengisa kweemetrikhi kuyahluka kakhulu kumthamo wecandelo elihlalutyiweyo. Ukuthengisa okwenziwa ngamaxesha athile onyaka okanye okukhoyo kunokubonakala njengokuphambuka xa ujonga ixesha elifutshane ukuze ugcine amehlo akho evulekile kwaye ulungelelanise idatha ngexesha elifanayo lexesha elandulelayo okanye kwangelo xesha linye kunyaka ongaphambili.
Amajelo okufumana kunye nokuThumela
Ngaba uyazi ukuba bavela phi abathengi bakho? Zithini iindlela zakho eziphambili zokufumana? Ngaba ziindlela ezifanayo abakufumanisa kuzo okanye zizitshaneli eziqhuba intengiso ezininzi? Zithini iziteshi eziqhuba eyona ngeniso?
Ukuba sicinga ukuba iwebhusayithi yakho yindawo yakho yokuguqula eyona nto kwaye unokuseta kukaGoogle, unokuyiphendula ngokulula le mibuzo sele ikhankanyiwe. Ukutyelela ukuFumana> Ingxelo yokujonga ngokubanzi ukuze ubone ukuba zeziphi iindlela eziqhuba ezona zithuthi zininzi kunye nokuncipha. Ungalwenza nzulu uhlalutyo ngokutshintsha icandelo labaphulaphuli lisuke Bonke abasebenzisi ukuba Abaguquli. Ukuba uneenjongo ezingaphezulu kwesinye okanye ukuseta iqela, ungaqhubeka nokwahlulwa kokusebenza kwesitishi kwinjongo ethile.
Ngayo yonke le datha ingentla idiliziwe kwaye yabekwa kwisakhiwo, ngoku uyakwazi ukubona ngohlobo lwababukeli olunokwenzeka ukuba luguqulwe, iindlela zabo eziya ngasemva nasemva kwendawo yokuguqula kunye nendlela abaziphatha ngayo ngaphambili, ngexesha nasemva kokwenza ukuthenga.
Ukuseka umthengi njengommeli oqingqiweyo womthengi wakho ofanelekileyo kuya kukunceda uthengise imveliso yakho ngcono kwaye uqonde ukuba yintoni ebaqhubele ekubeni bakhethe njengomthengisi / umboneleli wabo. Oku kuchazwe ngcono xa kubonisiwe ke masenze umzekelo. Yithi uthengisa iincwadi zokupheka kwaye injongo yakho kukunyusa inani lokuthengisa kunye nokukhuthaza uthotho olutsha lweMibulelo ezayo kwisiseko esitsha kunye nesikhoyo sabathengi. Yeyiphi kwezi kulula kuwe ukuyithengisa?
“Sinqwenela ukukhuthaza [olu] chungechunge lweencwadi zokupheka ngalo Mbulelo kwi-Instagram nakwiPinterest. Ujoliso lwethu ngabasetyhini, abaneminyaka engama-24-55 abathanda ukupheka kwaye sele bethengile okanye bacinga ngokuthenga incwadi yokupheka kulo nyaka ”
“Injongo yethu kukukwazisa [le] ncwadi zoncwadi kuMartha. Uhlala ekhaya umama phakathi kweminyaka engama-40 othanda ukupheka. Uyathanda #foodporn amaphepha kunye nokwabelana ngezitya zakhe kwi-Instagram. Unomdla kwaye uyonwabele imilinganiselo yesiko ke iiholide eziphambili ziyinto enkulu kuye njengoko ilixesha lonyaka kuphela apho anokuphekela lonke usapho kunye nabahlobo babo. UMartha sele eyithengile incwadi yokupheka kuthi kwaye ujonga i-Instagram feed kunye newebhusayithi kwiiresiphi eziveliswa luluntu ubuncinci kube kanye ngenyanga. Upheka kancinci kwaye utya ukutya okune-organic. ”
Uyawubona umohluko? Olu hlobo lokumelwa komthengi yinto onokuyifumana kwezi metric zinikwe apha ngasentla zibekwe kwisakhiwo.
Olu hlobo lokuhlalutya umthengi kunzima ukuseta kwaye luhamba ngobunzima. Ukuba ngumceli mngeni omkhulu kuwe, kuya kufuneka ngokuqinisekileyo funa uncedo kwiarhente yedijithali enamava kuhlalutyo lwabaphulaphuli, ukwahlulahlula, kunye nokwenza iphulo.
Uninzi lweeTekhnoloji zokuThengisa eziGcinayo kunye neeKPIs zabo eziBonayo
Ngoku ukuba uyazi umntu wakho wabathengi kwaye uyayiqonda indlela abaziphethe ngayo, iindlela onokuthi usebenze ngazo kugcino lwabo ziye zicace gca. Amaqhinga okuthengisa okugcina anokuhluka ngokuxhomekeka kwiniche yakho, kwintengiso, kubathengi nakwiinjongo, kodwa isakhelo esichazayo sokuhlala sichanekile.
Ezinye zeendlela zokugcina zentengiso zihlala ziluhlaza kwaye ziye zaqinisekiswa amaxesha amaninzi. Ewe kunjalo, xa unikwe ingqikelelo baqhutywa yidatha esekwe kwinqanaba langaphambili.
UkuSebenza kweeNjini zoPhando (SEO)
Ngelixa ikakhulu ithathwa njengecebo lokufumana, i-SEO ibonelela ngenani lamathuba okuphucula ukugcinwa kwabathengi kunye nokwakha ukuthembeka.
Oku ikakhulu kwenziwa ngokusebenza komxholo- kokubini kwisiza nangaphandle. Ngokuchonga amagama aphambili, umxholo kunye nemithombo yokuhambisa abathengi bakho bayazibandakanya kwaye banxibelelana nayo, ufumana inyathelo kufutshane nokwenza umxholo ukuba ubambe kwaye ubambe ingqalelo yabo. Phakamisa ukuthengisa okufumanekayo kwisicwangciso-qhinga sokuthengisa nokugcinwa kwe-SEO kunye nokwenza umxholo wendlela.
Sukujonga nje kumagama amafutshane angumsila kodwa zama ukuphakamisa ukubaluleka kwezihloko ezinxulumene noko. Ungakufezekisa ngoku Ukuphonononga amagama aphambili e-LSI kunye namagama aphambili amagama ajolise kwimidla yabasebenzisi kunye neenjongo zabo. Masibuyele kuMartha nakwincwadi yokupheka. Izihloko ezinokuthi ekugqibeleni zikhokelele uMartha ekuthengeni enye incwadi yokupheka kuwe ziindlela zokupheka ezicothayo, i-pantry, kunye neembiza ezisetyenziselwa ukuzenza, ukhetho lwezithako ezihluzwe lixesha okanye indlela ezikhule ngayo kunye neepakethe. UMartha angakhokelela ekuthengeni incwadi yokupheka ukuba uyazichaza njengomgogodla wosapho kwaye ubona itafile yesidlo sangokuhlwa njengendawo yokuqokelela, yoluntu kunye nexabiso losapho. Sukunyanzela umsebenzisi ukuba azichonge njengenxalenye yecandelo elikhulu, kodwa zama ukuzenzela amava abo.
Eminye imiba yezobuchwephesha ye-SEO, ngakumbi ngokubhekisele ekusebenziseni indawo njengewebhusayithi eqinileyo kunye nolwakhiwo lolwazi nge-HTML5 esebenzayo kunye nolwakhiwo lwe-microdata markup luya kuthi ukunceda abakhasi ukuba baqonde ngcono ubume kunye neesemantiki ezisemva kwayo. Oku kunceda ukufunyanwa kunye nokwenziwa kwamakhasi eziphumo zophando ngokokukhetha komsebenzisi ekujolise kuko. Umzekelo, ulwakhiwo kunye ne-semantic yewebhu markup iya kunceda ukubonisa iziphumo ezahlukeneyo kubantu abohlukileyo ngolu hlobo:
Xa uMartha ekhangela incwadi yokupheka ngenjini yokukhangela, uya kufumana iincwadi zokupheka ezicothayo njengeziphumo ezibuyisiweyo.
Xa ndikhangela incwadi yokupheka nge-injini yokukhangela, ndiza kufumana incwadi eneencwadi zokupheka njenge-Anarchist njengeziphumo ezibuyisiweyo.
Eminye imiba yezobuchwephesha enxulumene nokusebenziseka kwewebhusayithi kunye nokusebenza okunje ngexesha lokulayisha iphepha, ukuphendula kunye nokufumaneka kubalulekile kwizinto ze-SEO ezibangela ukugcinwa komsebenzisi kunye nokunceda ukwakha ukuthembeka. Ukuba iwebhusayithi yakho ayinakufikeleleka okanye kunzima ukuyilayisha, abasebenzisi baya kuthi babhuqe okanye kunqabile ukuba babandakanyeke kuyo.
Iingcebiso ze-KPI zokulandela umkhondo:
Inani le iziqulatho ezingenayo
Inani le amakhonkco aphumayo
Umthamo we ukugcwala kwezinto eziphilayo
Umthamo we ukuthunyelwa kwendlela
Iphepha lesiphumo seinjini yokukhangela (SERP) indawo esetiweyo yamagama aphambili
Ukujonga iphepha ngeseshoni nganye
kuhlalwe ixesha (ixesha eliphakathi kwiphepha)
Imidiya yokuncokola lijelo elikhulu lokwakha ulwazi, ukuthembana kunye nokunyaniseka. Iyangqinelana kakhulu ngokudibana ne-SEO / SEM yeendlela zokugcina. Ixhaswe ngentengiso yempembelelo ngumnyango wakho wokwakha abameli bohlobo lwentengiso ukuqhubela phambili ukomeleza ukugcinwa kunye nokuhanjiswa okuphezulu.
Xa ungqamene nekhalenda yakho yokuhlela / yokupapasha esetyenzisiweyo ye-SEO yokugcina intengiso kunye nokudityaniswa kunye nee-hashtag ezinophawu kunye nokulandelela ikhonkco iba sisixhobo esinamandla sokwakha ukuthembeka kwabathengi.
Unokunyusa ii-hashtag ezinophawu kunye nokulandela umkhondo kwekhonkco ukuchonga kunye nokuphonononga amathuba amatsha okuzibandakanya kwaye ucofe umthombo wolwazi olunokubakho. Ngokunokwenzeka esona sibonelelo sikhulu semidiya yoluntu lithuba lokuzibandakanya kunye nesiseko sabathengi abanokubakho kunye nesikhoyo ngexesha lokwenyani. Sebenzisa iincoko kunye nokufundisa abasebenzi bakho ukuba basebenzise imithombo yeendaba zentlalo njengenxalenye yenkonzo yakho yabathengi lelona cebo linye lingakhathalelwanga elenza imimangaliso yokwakha ukugcinwa kunye nokunyaniseka kwabathengi.
Inani le abalandeli kunye nabalandeli
uthethathethwano izinga - zombini umkhankaso kunye nephepha elithile
Ipesenti ye ukuthunyelwa kwendlela eveliswe ngamajelo eendaba ezentlalo
The umthamo womxholo Ukutyhalwa njengenxalenye yokuhanjiswa kwentengiso
Inani le zigqityiwe izicelo zenkonzo yabathengi ngencoko yemidiya yoluntu, izimvo kunye nemiyalezo
I-imeyile ayisoze yafa kwaye sisiseko esiphakathi sayo yonke imisebenzi yewebhu kunye nokusetyenziswa.
Ukuthengisa nge-imeyile kuqhelekileyo kusetyenziswa njengomqhubi ophambili wokugcina umsebenzisi kunye shushubeza kubanda kubangela. Amaqhinga amabini aqhelekileyo aqeshwe ngentengiso ye-imeyile ukuphucula ukugcinwa kwabathengi kukuthumela iileta zeendaba kunye neendaba zamva nje kunye nohlaziyo lomxholo kunye nokulukuhla ukuthengwa okuphindaphindiweyo ngokunikezela ngezaphulelo kunye nokujongana nesiseko sabathengi esele sikhona.
Umxholo wokulungiswa kwawo nawaphi na ala maqhinga anokuvumelaniswa nekhalenda yakho yokuhlela ukubonelela ngezona ziphumo zibalaseleyo ngokwenqanaba elivulekileyo kunye ne-CTR. Ungaqhubeka nokwaphula iinzame zakho ngokwahlulahlula uluhlu lwe-imeyile ngokokukhetha komsebenzisi, iindlela zonyaka, kunye nedemokhrasi.
kodwa Intengiso ye-imeyile kufuneka isondele ngononophelo olukhulu kunayo nayiphi na kwezi zikhankanywe ngasentla. Ukunyusa kakhulu kunye nokuphatha kakubi kunokwenza ukuba i-domain yakho yonke ibhaliswe kuluhlu kwaye yonakalise ngokuthembakeleyo ukwakhiwa ukuza kuthi ga ngoku. Eyona nto ibalulekileyo ekufuneka uyiqaphele apha kukuba umsebenzisi wakho uyazi ukuba ufumene njani kuluhlu lwakho lokuposa, uza kuliphatha njani kwaye unikwe ithuba lokuhlengahlengisa izinto azikhethayo okanye angabhalisi ngalo naliphi na ixesha.
Xa usenza isigqibo malunga nokuba uza kusebenzisa iseva yakho yokuposa okanye inkonzo yomntu wesithathu kuyo, nceda uqwalasele ukuba uyakwazi ukuyithobela yonke le mithetho idweliswe apha ngasentla kwaye unakho ukulinganisa kunye nokulandelela ukusebenza kwayo.
Inani le imeyile ezithunyelwe phuma-iphulo elithile kunye lilonke
Cofa kwinqanaba (CTR) ye-imeyile
Ireyithi evulekileyo yephulo le-imeyile elithunyelweyo
Phinda inqanaba lokuthenga ngejelo le-imeyile
Ukubeka iliso, ukulinganisa kunye nokwandisa ukukhula
Njengoko sele kukhankanyiwe, ukuze uphucule ukunyaniseka kwabathengi bakho kwintengiso yedijithali, kufuneka ubazi abathengi bakho. Kukho izikhokelo ezininzi zokuhlalutya kwabathengi ukuphonononga kunye nokunxibelelana neenzame zakho zokuthengisa. Ukuyila isicwangciso sokuthengisa ukugcinwa kwabathengi kunokwahluka kumashishini ukuya kwiimpawu kodwa iinkqubo zenkqubo ezihamba nazo ziyahambelana.
Ukulinganisa okunzulu kunye nohlalutyo oluphuculweyo lwenxalenye nganye yohambo lwakho lomthengi sisiqalo esihle kodwa siya kukunika itoni yedatha engacwangciswanga. Indlela oyisebenzisa ngayo le datha ukuba uyibuze kwaye unike impendulo kwimibuzo ethile malunga nokuziphatha kwabo ngaphaya kokugqitywa komjikelo wentengiso iya kugqiba impumelelo yakho ekwakheni ubudlelwane bexesha elide kunye nesiseko sabathengi bakho.
Kwaye ekugcineni kugcina ukunyaniseka nokuthembana.
tags: amajelo okufumanaizinga lokuhlawulaizinga lokucofaizinga lokucofaumntu wabathengiInkonzo eyenzelweinkonzo yabathengi isiceloukuthengiswa kwedathahlala ixeshaIimeyile zokuthengisa nge-imeyileinqanaba lothethathethwanofansabalandelii-google analyticsiziqulatho ezingenayoizikhombisi zomsebenzi eziphambiliKPIIindlela zokuthengisaizinga elivulekileyoukugcwala kwezinto eziphilayoamakhonkco aphumayoukujonga iphephaUkujonga iphepha ngeseshoni nganyeabantuukuthunyelwa kwendlelaPhinda ixabiso lokuthengaamajelo okugcinaUkugcina iimetrikhiiimetriki zokuthengisaiphepha lesiphumo seinjini yokukhangelakhangela iimetriki zokuthengisainyokaiithayile zemidiya yoluntu
Iingcebiso ezili-10 zeQhinga lokuQiniswa kweGamification